Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Matheus Cunha Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ anyị nke Matheus Cunha na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ dịrị, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Ọ bụ nkọwa dị nkenke banyere akụkọ ndụ Matheus Cunha site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka ị nụ ụtọ ọdịdị nke ihe ndị dị ndụ, nke a bụ nchịkọta ihe atụ nke ndụ ya na ọganihu ọrụ ya.
Matheus Cunha akụkọ ndụ.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ọkpụkpọ egwu kachasị mma nke Hertha. Agbanyeghị, ọ bụ mmadụ ole na ole gụrụ akụkọ ndụ ya, nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
Matheus Cunha Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido mmalite ndụ, aha ya bụ Mateo. Matheus Santos Carneiro da Cunha mụrụ na 27th ụbọchị nke May 1999 na João Pessoa na Brazil. Amuru ya nne ya, Luziana Cunha na nna ya, Carmelo Cunha.
Zute nne na nna Matheus Cunha.
Ezigbo ezinụlọ Matheus Cunha:
Nwa Luziana na Carmelo bụ onye Brazil zuru oke. N'ezie, o nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ nke e guzobere na mba South America, nke a maara nke ọma maka ememme a na-eme ememe ya na kpakpando mara mma dịka Pelé na Ronaldo de Lima.
Nwa amaala João Pessoa toro na arụsị na-efe n'obodo nna ya Ronaldinho na Podolski. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ na-ele egwuregwu zuru ezu maka ndụ ya niile dịka nwatakịrị ma nwee ihe maka igwu Futsal.
Ọ bụ nwa afọ João Pessoa.
Ndị nne na nna Mateo nwere obi ụtọ na njikọ aka football ya n'oge mbụ. Agbanyeghị, ha hụrụ na nke a egbochighị mmepe ya n'akụkụ ndị ọzọ nke ndụ.
Thezọ ezinụlọ Cunha si chọpụta ya, agụmakwụkwọ magburu onwe ya maka Mateo na nwanne ya nwanyị Mariah dị mkpa dị ka mmepe na bọọlụ.
Foto nwata dị nke Matheus Cunha na nwanne ya nwanyị Mariah.
Na mgbakwunye, ezinụlọ nke etiti na-ebi ndụ nke ọma ma na-ele anya maka ọdịmma kacha mma nke Matheus Cunha na nwanne ya nwanyị. N'ezie, ọghaghị n'ihu na-agha ụgha mgbe ọ kwuru na:
“Abụ m nwata tolitere na ihe niile m chọrọ, ọ dịghị ihe kọrọ m.”
Matheus Cunha Bio - Akụkọ nke Football:
N'adịghị ka ozi na-ezighi ezi zuru oke, njem njem ahụ amaliteghị na Coritiba. N'ezie, ọ malitere site na ụlọ ọgbakọ dị na Cabo Branco.
N'ụzọ na-akpali mmasị, Ọ bụ klọb nna ya gwuru maka ya! Mgbe nke ahụ gasịrị, Cunha gara ụlọ ọrụ Recife - CT Barão.
O nwere nkwado nke onye ọ bụla n'oge ọ bụ nwata.
Afọ Ndị Mbụ na Ọrụ:
Ọ bụghị ruo mgbe ntụgharị ahụ gbanwere 14 ka ọ sonyere Coritiba. N'icheta otu o si rute na klọb ahụ, Cunha kwuru na:
“Otu ọchụnta ego nwere mmasị n’egwuregwu m, ya na papa m wee kpọrọ m gaa Coritiba.”
Mgbe Cunha nọ na klọb dị na Parana, Cunha nọrọ afọ anọ na-agbago n'ọkwá ma na-agbanye akpụkpọ ụkwụ ya na nkwadebe maka ọrụ ga-eme ka ọ gafee osimiri Brazil.
Hụ onye ahụ nọ n’afọ iri na ụma ka ọ na-eme ihe ọ ma n’ụzọ kacha mma.
Matheus Cunha Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'ezie, nkwadebe kwụrụ ụgwọ mgbe ndị nnọchi anya si ụlọ ọrụ Switzerland, Sion hụrụ akara aka n'ihu ma kpọtụrụ kọntaktị maka nnyefe ya.
“Mgbe m njikwa kwuru banyere amaghị na ekwe omume nke ịmalite ọrụ m na Europe, M na-echeghị ugboro abụọ. n'ezie, enwere m nnukwu mmasị igwu egwuregwu bọọlụ Europe. ”
Na mbu, ibi na kọntinent ohuru siri ike maka onye dị afọ iri na asaa. Otú ọ dị, ọ dị ngwa imeghari ma malite ịchọ asọmpi siri ike.
N'ezie, Cunha nọrọ naanị otu afọ na Sion tupu ọ banye Rb Leipzig na 2018.
O nweghi ike ichere inweta asọmpi siri ike na Red Bull Leipzig.
Matheus Cunha Biography - Bilie Iji Maara Aha Akụkọ:
N'ụzọ dị mma, Rb Leipzig nwere nkà ihe ọmụma nke ịkụ nzọ dị ukwuu na ndị na-eto eto, na Mateo abụghịkwa otu. Ha nyere ya ikpo okwu iji gosipụta onwe ya ma nwee ọfụma na ebumnuche mara mma iji nye otuto.
N'ezie, njedebe ya dị egwu megide Bayer Leverkusen na 2019 bụ ihe mgbaru ọsọ Bundesliga nke afọ 2020. Ọzọkwa, ọ bụ n'etiti nhọpụta maka FIFA Puskas award.
N'oge a na-ede mpempe akwụkwọ a na Matheus Cunha akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya, onye na-eti ihe nọ na Hertha BSC ebe ọ gara n'ihu na-agba ọsọ.
Na mba ụwa, ọ nwere ihe ịga nke ọma na Brazil ebe ndị na-agbapụ Firmino na Jesus dara.
Ọ na-aga n'ekwughị na ya bara uru na klọb na mba ma ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ ebube. Kedu ụzọ ọ bụla ihe chere ya, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Matheus Cunha Girlfriend / Nwunye Ga-abụ?
Onye egwu ahụ bụ otu n'ime ọgụgụ isi ole na ole na-emeri ma n'ọhịa ma n'èzí. Ọ nwere ezigbo enyi nwanyị nwanyị mara mma chọrọ ịlụ. Aha ya bụ Gabriela Nogueira.
Ọ bụ onye obodo Rio de Janeiro ma na-arụ ọrụ dị ka ọkàiwu. Gabriela nọrọ na Cunha ruo mgbe anyị nwere ike icheta. N'ezie, ọ bụ otu n'ime ndị nyeere ya aka idozi mgbe ọ bịarutere Europe.
Ajuju adighi ma ima nke ha. Ha na-aga ebe niile ma na-eme ihe niile ọnụ.
Ha nwere nwa nwoke - Levi amuru na 2020. Mara onye nwetara a ịlụ ọlụlụ maka ekeresimesi? Gabriela n'ezie. Ọ dị ịtụnanya na onye na-eti ọkpọ na-ezube ime ya nwunye ya.
Matheus Cunha ya na enyi ya nwanyị Gabriela na nwa Levi.
Ndụ Matheus Cunha:
Nwa nwoke Luziana na Carmelo enweghị obi abụọ ọ bụla hụrụ n'anya maka ịbụ ndị ịgba egwu dị ịtụnanya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole hụrụ ya n'anya gabiga ihe ọ na-eme.
Ha bụ ezinụlọ ya. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ezinụlọ Matheus Cunha. Anyị ga-emekwa ka eziokwu banyere ụmụnne ya na ndị ikwu ya dị Ebe a.
Banyere Matheus Cunha Nna:
Carmelo Cunha bụ aha nna na-akwado nkwado dị ịtụnanya. O si na Paraíba. Dịka e kwuru na mbụ, ọ bụbu ụmụ amaala. Ọ nwekwara akụkọ ihe mere eme na-arụ ọrụ dị ka onye nkụzi.
Cunha kwuru na nna dị ịtụnanya na-akpali ya ma na-agba ya ume mgbe niile. Ọ bụ ezigbo onye nlereanya nke nna.
Foto nwata di Matheus Cunha ya na nna ya.
Banyere Matheus Cunha Nne:
Luziana Cunha bụ aha mama mama kachasị mma. O si na Pernambuco na Brazil. Na 2019, o nwere ihere ilere nwa ya nwoke ka ọ pụta maka otu mba na Brazil.
Dị ka onye ọ bụla ọzọ so n'ezinụlọ Cunha, ọ nwere obi ụtọ ịmara na nwa ya nwoke nwere ọnụego ka mma n'etiti ndị otu egwuregwu otu egwuregwu. Cunha hụrụ ya n'anya nke ukwuu, ha nwekwara ihe ncheta dị ebube ọnụ.
Foto nwata di Matheus Cunha ya na nne ya.
Banyere ụmụnne Matheus Cunha:
Onye na-egbu ihe ahụ nwere nanị otu nwanne nwanyị. Ọ bụ naanị nwanne ya nwoke, aha ya bụ Mariah. Must ga-ahụrịrị foto nwata ya na onye na-eti ihe n'elu. Ha dị ezigbo nso ma nwee mmasị na ibe ha.
LR: Carmelo, Mariah, Luziana, Mateo na nne nne.
Banyere ndị Matheus Cunha:
Ewezuga ezi ezinụlọ nke Mateo, amabeghị ọtụtụ ihe gbasara ndụ ezinụlọ ya. Ga-ahụtụla foto nne nne ya, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-achọ ịmata ma ọ bụ nne nna ya ma ọ bụ nne nne ya. Otú ahụ ka anyị dịkwa.
Na mgbakwunye, anyị ga-enwe mmasị ịkọwara anyị banyere ndị nna nna ya, ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne nne ya, ụmụ nwanne nne ya, na ụmụ nwanne ya.
Matheus Cunha Ndụ Nke Onwe:
Ọnye na-bụ Matheus Cunha pụọ ​​na pitch? Ndụ ya ọ na-agagharị naanị igwu egwu n'ubu onye na-agbachitere ya?
Nọdụ ala ka anyị na-ewetara gị eziokwu banyere ọdịnihu iji mee ka ị nwee ike ịchọta onye ọ bụla.
Iji malite, Matheus Cunha bụ onye nwere obi ụtọ na-enwe obi ụtọ na-enwe ezi àgwà. Ọ na-enwe echiche ziri ezi n'ihe niile gbasara ndụ ma na-enwu ezi ikuku.
Ọzọkwa, ọganihu abụghị ihe nzuzo. Ọ na-emeghe ikpughe eziokwu banyere ndụ ya na nke onwe ya.
Dị ka ọtụtụ ọgụgụ isi anyị dere banyere ya, Matheus nwere mmasị igwu mmiri. Ọ na-etinye oge dị mma n'akụkụ osimiri ma mee njem njem ya.
Lelee ọhụụ na-etinye otu n'ihe omume ntụrụndụ ya kachasị amasị.
Matheus Cunha si ebi ndụ:
Kedu ikike ịzụta nke ụgwọ weekly 58,349 kwa izu? Kedu ka ọ ga-adị gị ịnweta ọnụọgụ nde Euro 7.5?
Ga-enwerịrị uche nke uche nke ihe a na-enweta na ụdị ịkwụ ụgwọ ahụ. Ọ gafere ịnweta ụgbọ ala na ụlọ na Germany na Brazil.
Cunha ekwuola ihe niile ekwuru na ọ ga-enwerịrị ihe ọ ga - eme n'ihe ọ ga - eme ego niile dị na aka ya. Ka o sina dị, ọ ghọtara na ndụ pụtara na ọ ga-atọ ụtọ ma ọ naghị agọnahụ onwe ya ihe ụtọ nke ịdị ndụ.
Anyị enweghị ike ịkwado ma nwee mmasị na foto nke ya na nwunye ya na nwa ya nọ ọdụ ụgbọelu nzuzo ka ọ na-egosi ha ụwa. O doro anya na ọ na-ebi ndụ nke ụmụ amaala dị elu, anyị na-agbakwa àmà banyere ya niile.
Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịkwụ ụgwọ ịnya ụgbọ elu nke onwe ya dị ka ọ na-eme.
Eziokwu banyere Matheus Cunha:
Iji mechie isiokwu a na akụkọ nwata na akụkọ ndụ Mateo, ebe a bụ akụkọ amachaghị ma ọ bụ akụkọ gbasara ya.
Eziokwu # 1 - Gwọ ọnwa na otu nke abụọ:
EGO NA EGO Euro (€)
Kwa Afọ: € 3,034,148.
Kwa ọnwa: € 252,846.
Kwa Izu: € 58,349.
Kwa :bọchị: € 8,336.
Kwa elekere: € 347.
Nkeji nkeji: € 5.78
Sekọnd: € 0.09
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Matheus Cunha's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ndị na-aga n'ihu bụ Onye Kraịst. Kpọmkwem, onye na-ekpe Katọlik. Mgbe a jụrụ ya ma ọ nwere nkwenkwe ụgha ọ bụla, Cunha zara na:
“Mgbe ọ bụla m rutere n'ọgbọ egwuregwu ahụ, ana m emetụ ahịhịa aka ma mee akara nke obe. Ọzọkwa, m susuru egbugbu Meri, nne Jizọs. Ha niile bụ omenala obodo m na okpukpe m. ”
Eziokwu # 3 - FIFA 2020 ogo:
Cunha nwere ngụkọta nke 80 isi na ikike nke 87. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwere na ọ bụ ọkwa na-ezighi ezi, ọ bara uru ịmara na Roberto Firmino bụ 86/86.
Na lifebogger, anyị na-adụ ọdụ na ekwesighi ịkọwa onwe dị n'etiti ndị na-eto eto na ndị dike. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ịmatakwu eziokwu ahụ bụ na Cunha bụ naanị isi ole na ole site na ime ka onye otu ya hara.
Ọ bụghị ihe ọjọọ ma na-ekwe nkwa.
Eziokwu # 4 - Mmekọrịta na Neymar:
Must ga-ahụrịrị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị n'ihu Neymar Jr na ahụ na nkà. Anyịnwa nwekwara ike. Ha bụ ezigbo enyi na anyị na-achọpụta na mmekọrịta ha ga-eto eto karịa afọ.
Mgbe Cunha nwetara ọkpụkpọ oku izizi ya na ndị otu egwuregwu bọọlụ, a gbakwụnyere ya na otu WhatsApp ebe o dere “Obi dị m ụtọ ịnọ ebe a”. Neymar zara ya ozugbo 'Nnọọ!' Ọ ga-enwe obi ụtọ mgbe niile igwu egwu n'akụkụ PSG.
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta a na Matheus Cunha akụkọ nwata na akụkọ ndụ ya. Anyị nwere olile anya na ọ kpalitela gị ikwere na nrọ na ọhụụ ga-emezu ma ejiri ya rụọ ọrụ.
Dị nnọọ ka Cunha rọrọ nrọ igwu egwu na Europe wee gaa ọtụtụ kilomita iji nweta nrọ ahụ.
Ọ dị anyị mkpa ịja ndị nne na nna na-aga n'ihu maka nkwado ha maka ọrụ ya n'okwu na omume.
Na lifebogger, anyị na-anya isi n'inye akụkọ nwata na akụkọ ndụ eziokwu na izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya, kpọọ anyị ma ọ bụ hapụ ozi n'okpuru.
Aha zuru ezu: Matheus Santos Carneiro na Cunha.
aha otutu: Matiu.
Age: 22 afọ na ọnwa 4.
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 27 nke Mee 1999.
Ebe amụrụ onye: João Pessoa dị na Brazil.
Ndị nne na nna: Luziana (nne) na Carmelo (nna).
Ụmụnne: Mariah (nwanne nwanyị).
Ogologo na cm: 184 cm.
Egwuregwu Ọnọdụ: Gaanụ n'ihu / ọkpọka.
Enyi / nwunye ka: Gabriela.
Children: Levi (nwa nwoke).
Net uru: Nde Euro 7.5
Diego Simeone Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ